Samsung Galaxy Duos GT-19082L မှာ root သွင်းပြီး myanmar font နဲ့ keyboard သွင်းနည်း | နည်းပညာခရီးသည်
Posted by MMITShare at 04:460comments
Android ဖုန်းအတွက် မြန်မာ ဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ် Root လုပ်နည်း
<<<Fb ကိုလာလည်ချင်ရင်တော့ ဒီကိုနှိပ်ဗျာ>>>
စိတ်ကြိုက်မြန်မာမင်္ဂလာသီချင်းများကိုစုစည်းထားပါတယ်...စုစုပေါင်းသီချင်း ၉၁ပုဒ်ပါဝင်ပါတယ်.... မြန်မာမင်္ဂလာသီချင်းများကိုအွန်လိုင်းမှာနားဆင...
i mobile android ဖုန်းတော်တော်များများကို Root လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Supersu
i mobile android ဖုန်းတော်တော်များများကို Root လုပ်ပေးနိုင်မယ့် Supersu ဗားရှင်းအသစ်လေးထွက်တာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရမ်းကိုလွယ်ကူ...
11/5/2014 ရက်နေ့မှာကျရောက်တဲ့အမေများနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မေမေသီချင်းများကိုစုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... သီချင်းများကို နားဆင်ရန် =&g...
Huawei C8815,Android 4.1 V100R001C92B137; Firmware
ဒီတစ်ခါတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Huawei C8815,Android 4.1 V100R001C92B137; အတွက် Firmware လေးဖြစ်ပါတယ်.. လိုချင်သူများ အောက်မှာဒေါင်းနိုင်ပါတယ်....
C8816,Android 4.3,V100R001C92Build Number176
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တောင်းဆိုထားတဲ့ Huawie C8816 အတွက် Firmware လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ကလိတတ်တဲ့ကိုကိုမမတွေအတွက်လဲအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတာ... ...
Titanium Backup PRO★ root v6.1.5.3
Titanium Backup PRO ဗားရှင်းအသစ်လေးထွက်တာတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဒီ App ကိုအသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းမှာ Root ရှိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်... တော်တေ...
Samsung Galaxy Duos GT-19082L မှာ root သွင်းပြီး myanmar font နဲ့ keyboard သွင်းနည်း Samsung Galaxy Duos GT-19082L ဖုန်းမှာကျွန်တော်ကို...
ios 7.1.1 အတွက် Jailbreak နှင့် မြန်မာ ဖောင့် ကီးဘုတ် သွင်းနည်း iOS 7.1 နဲ့ iOS 7.1.1 ကို Pangu ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပ...
Kaspersky Internet Security 2015 Full version(162MB)
Kaspersky Internet Security 2015 Full version Computer သမားများအတွက် Kaspersky Internet Security 2015 Full version လေးပါ။ ...
Wifi Password တွေကိုရှာပေးမယ် WIBR+ WIfi BRuteforce hack APK 1.0.33
ဒီ App လေးက Android Devices ကိုင်ဆောင်သောသူများအတွက် Wifi Passowrd လေးတွေကိုဟက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်..ဒီ App ကိုအသုံးပြုတဲ့ Adnroid ဖုန်းတွေမှာ...
Android ဖုန်းအတွက် မြန်မာ ဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်
iOS 7.1.1 Jailbreak ၊ myanmar font & keyboard
App Center 5.0.31.12 1336
1Mobile Market v.3.9.9.4
Google Play Store v.4.6.17
Aptoide v.5.0.0 (Root Require)
vRoot English (For PC)
kingo (For PC)
Unlook Root (For PC)
SRS Root (For PC)
One Click Root (For PC)
Rescueroot (For PC)
vRoot v.1.0.7 (For Android)
KingRoot v.2.30 ( For Android)
UniversalAndroot v.1.6.1 (For Android)
Framaroot_v.1.9.1 (For Android)
BaiduRoot_v.2.3.0 (For Android)
ExynosAbuseRoot_v.1.4.0 (For Android)
Pro Myanmar Root (For Android)
RootMaster_1.3.6 (For Android)
Love မြန်မာ Keyboard
မုန်တိုင်း Android Keyboard
Samsung Zawgyi Enabler
MMAS Smart Zawgyi
လေ့လာသင့်သောဆိုဒ်များ MMITShare ပိုတိုရှော့ ဘလော့ခရီးသည် စာပေနန်းတော် ရုပ်ရှင်မြို့တော် လယ်တီမြေသား Software မြို့တော် သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု Pyae Thaw အခြေခံနည်းပညာသမားလေး .::just for share::. မြန်မာပြည် လူငယ်များရဲ့ နည်းပညာ ဝေမျှခြင်း PC ဂိမ်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မကွေး) ဒီမိုးသား
မြန်မာရုပ်ရှင်ကြည့်ရန်ဆိုဒ်များ Burmeseclassic Shwevideos Shwedream Shweo FreeMyanmarVcd
mp3သီချင်းအတွက်ဆိုဒ်များ Myanmar Mp3 Album စည်း ဝါး Myanmar Online Music MYMClub myanmarallmusicchannel Mr.Ehlar
IPHONE FIRMWARES DOWNLOAD
iPhone 5s – iOS 7.0.4 – Global iPhone5,3 (11B554a)
iPhone 5s – iOS 7.0.3 – Global iPhone5,3 (11B511)
iPhone 5s – iOS 7.0.2 – Global iPhone5,3 (11A501)
iPhone 5s – iOS 7.0.1 – Global iPhone5,3 (11A470a)
iPhone4Newer Model
">iPhone 3GS – iOS 5.1.1 – iPhone 2,1 (9B206)
ပိုစ်အသစ်တင်တိုင်း Email ကနေဖတ်ချင်ရင် Email လိပ်စာထားခဲ့ပါ:
Delivered by နည်းပညာခရီးသည်
တင်ထားသမျှလေးတွေ February (1) September (1) July (1) May (2) April (4) March (22) February (1)
နည်းပညာခရီးသည်ဘလော့ကို ၂၀၁၄ခုနှစ်ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည် ၊ ဘလော့ရေးသားသူ နည်းပညာခရီးသည်